DIGITALIS: ISTICMAAL, QALAB LAGU DAWEEYO IYO KA HORTAGGA - DAAWADA DADWEYNAHA
Digitalis (Digitális) waa cawska reerka qorsheysan. Kala gooyey Mediterranean, waxaa laga helaa Aasiya iyo Waqooyiga Afrika.
Waxyaabaha kiimikada ee digitalis
Halbeegga digitalis waxaa lagu dhejiyaa haraaga dabiiciga ah, kaas oo, oo la xiriira carbohydrates, waxay sameeyaan glycosides. Warshadda waxaa ku jira shan qaybood oo kala duwan: digitoxigenin, gitoxigenin, gitloxigenin, digoxigenin iyo diginigenin.
Glycosides ayaa ku jirta qeyb ka mid ah foxglove waxaa loo yaqaannaa cardinolides ama glycosides wadnaha (cardiotonic glycosides). Kuwa ugu muhiimsan waa lanatozida A, B, C.
Marka ficil-celin kiimikada, isdhexgalka biyaha glycosides waxay sameeyaan xeryahooda cusub: digitoxin, acetyldigitoxin, acetylgitoxin, acetyldigoxin, gitoxin, digoxin.
Geedka waxaa sidoo kale ku jira kiimikada dabiiciga ah: flavonoids (luteolin), saponins. Caleemaha Foxglove ayaa hodan ku ah macro iyo nafaqeeyayaal yar yar: magnesium, potassium, calcium, selenium, zinc, birta iyo ash.
Guryaha dawooyinka ee digitalis
Digitalis wuxuu leeyahay sifooyin badan oo bogsiin ah. First of dhan, dhirta this ka caawisaa cudurrada wadnaha sida wadnaha qalal la'aan daran.
Dijital wuxuu daaweeyaa oo ka takhalusaa dhibaatooyinka wareegga. Waa wax ku ool ah hypertension iyo bararka taasoo keentay cudurka wadnaha.
Marka la daaweynayo digitalis, oo ka duwan daawooyinka badan, ma xanuujin karaan xuubka xabka ee mareenka caloosha.
Kumbiyuutarrada ku jira qeybta daawooyinka waxay yareyn kartaa neefsashada gaaban, si caadi ah u garaaca garaaca oo caadi u ahaato xaaladda guud ee jirka.
Iyada oo dhirtan waxaad xoojin kartaa habka nabarrada bogsata.
Isticmaalka digitalis ee daawada dhaqameed
Daawada rasmiga ah, digitalis waxaa loo isticmaalaa dhibaatooyinka wadnaha wadnaha. Dhakhtarrada dawadu waxay helayaan digitoxin, gitoksin iyo kordinidov, kuwaas oo loo isticmaalo diyaarinta daawooyinka ka soo caleemaha digitalis iyo grandiflora.
Diyaargarowga daroogada ee kiciya muruqa wadnaha, isticmaal foxglove dhogorta leh. In caleemaha geedka waa Celanid iyo acetyldigitoxin, kuwaas oo ah qayb ka mid ah daawooyinka noocan ah.
Iyada oo ku saleysan foxglove ama ka qaybgalkeeda, daroogooyinka waxaa loo diyaariyaa xanuunka dareenka, dhiig-karka, iyo diyaarinta tallaabooyinka bogsashada.
Daawooyinka ugu caansan ee digitalis ah: gitalen, digipuren, lantoside, cordigid, digitoxin.
Ma taqaanaa! Laga soo bilaabo ilaha qaarkood waxay soo socotaa in digitalis ahaan daawo ahaan loo yaqaanay qarnigii shanaad. Si kastaba ha ahaatee, diiwaanka ugu horeeyay ee taariikhda ee taariikhda 1543 sano. Tilmaanta waxaa ku jira dhirta dhakhtarka ee Leonart Fuchs, oo ku sharxay warshadda si faahfaahsan.
Cunto daawo dhaqameed: daaweynta cuduro kala duwan iyadoo la adeegsanayo digitalis
Daawada dadweynaha, decoctates daawada iyo infusions of digitalis ayaa si ballaaran loo isticmaalaa, iyo sidoo kale waxyaabaha budada ah.
Wixii diyaarinta daaweynta ee hypertension Ku shub hal garaam oo qallalan, caws la jarjaray oo leh galaas biyo karkaraya (200 ml). Ku adkee isku dar ah afartan daqiiqo.
Qaado hal qaado oo macaan ah saddex jeer maalintii.
Waa muhiim! Carruurtu waxay qaadi karaan faleebo laba sano oo kaliya hal shaaha.
Waxaa loo isticmaalaa boogaha bogsashada budada. Cawska qallalan ayaa ka baxaya budada.
Nadiifi nabarka iyaga. Waxaad dabooli kartaa faashad iftiin leh, faashaduna way ka fiican tahay, sidaa darteed maqaarka ayaa neefsanaya.
Dhibaatooyinka nidaamka dareenka ayaa la diyaariyaa tincture of foxglove on khamriga. Shub walaaq qalalan oo foxglove caleemo gali dhalada mugdi madow, ku shub 200 ml khamriga halkaas. Awoodda si adag u xir, kuna adkeyso meel gudcur ah, marmarna gariirin.
Toddobaad ka dib, cadaadis, ku shub weel nadiif ah oo ku kaydi meel gudcur ah. Hal qadar waa inaan ka badnayn soddon dhibcood.
Marka wadnaha lagu guuleysto faleebo. Hal garaam oo caleemo la jajabiyey ayaa ka buuxsamay biyo kulul 200 ml. Ka dib markii faleebo, qaado shaaha saddex jeer maalintii. Carruurtu waxay diyaariyaan xal yar oo xoog leh - 0.5 gram markiiba 180 ml oo biyo ah.
Digniin! Ha isku daweyn oo ha qaadan daawada muddo dheer. Qaybaha qaarkood waxay ku ururaan jirka waxayna keeni karaan sumeyn.
Sida loo diyaariyo walxo cayriin ah oo daaweyn ka sameysan digitalis
Waxay ururiyaan foxglove ujeeddooyin daaweyn ah bishii Agoosto - Sebtembar. Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo diyaarinta alaabta ceeriin ah digitalis cimilada qalalan habeenkii.
Leaves la gooyaa aan lahayn stem: ma laha wax faa'iido leh. Habeenkii foxglove waxaa ku jira xoojinta ugu badan ee maaddooyinka waxtarka leh.
Caleemaha qiyaasta wax soo saarka ayaa la qalajiyey qallajiyeyaal qaas ah heerkulka ilaa 60 digrii. Inta lagu jiro qalajinta, alaabta ceeriin ah ayaa si isdabajoog ah loogu soo jeestay qalajinta lebiska.
Qalabka ceeriin ayaa diyaar ah marka saxanka sare uu qaado midab casaan. Ku dhaji badeecada bacaha ama kartoonada meel qallalan 24 bilood.
Glycosides, kuwaas oo ku jira qayb ka mid ah geedo yaryar, waxay u muuqdaan inay isku uruuraan oo si tartiib ah uga baxaan jirka.
Iyada oo la isticmaalo muddada dheer ee maalgelinta laga helo sumowga suurogalka ah ee dijital ah. Warshad foxglove waa sunta dhirta adag.
Xiiso leh In England, sababtoo ah dhacdooyinka sii kordhaya ee sumowga, digitalis ayaa laga saaray shaqada. Dayactirka geedka 1756, William Withering, oo helay awoodda digitalis si loogu daweeyo cudurka wadnaha.
Dijital wuxuu leeyahay khatar aad u adag oo ah cudurada sida: cudurrada faafa, jirro la'aanta jidhka, bradycardia, cudurada wadnaha, xanuunka maskaxda. Iyada oo daryeel weyn la siiyo waa in la siiyaa infusions ama decoctions carruurta.
Calaamadaha lagu sumoobo (arrhythmia, shuban, dibnaha buluugta iyo lallabbo, qallajinta iyo matag), waa lagama maarmaan in isla markiiba ay caloosha ku shubaan biyo badan oo la xiriir dhakhaatiirta.
In aad ku hawlan tahay daaweynta digitalis sida ku cad cuntooyinka daawada dhaqameed, ha iloobin daawada rasmiga ah. Daaweyn kasta waa inuu la socdaa dhakhtarkaaga - wuxuu kaa badbaadin doonaa cawaaqib xun.